ထူးထူးဆန်းဆန်း နည်းလမ်းတွေနဲ့ ဝူဟန်ဗိုင်းရပ်စ်ကို ကာကွယ်နေကြတဲ့ တရုတ်နိုင်ငံသားများ – ရွှေအလင်း
ထူးထူးဆန်းဆန်း နည်းလမ်းတွေနဲ့ ဝူဟန်ဗိုင်းရပ်စ်ကို ကာကွယ်နေကြတဲ့ တရုတ်နိုင်ငံသားများ
တရုတ်နိုင်ငံမှာ ဖြစ်ပွားနေတဲ့ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ဟာ လူအချင်းချင်းကူးစက်နိုင်ပြီး ကူးစက်မှု မြင့်မားနေတာကြောင့် စိုးရိမ်လျက်ရှိကြပါတယ်.. ဒါကြောင့် တရုတ်လူမျိုးတွေဟာ အပြင်ထွက်တဲ့အခါမှာ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်မကူးအောင်လို့ Mask တွေ တပ်ပြီး ထွက်ကြပါတယ်… ဒါ့အပြင်တချို့သော ခရီးသွားတွေကတော့ ထူးထူးဆန်းဆန်း အကာအကွယ်တွေလုပ်ပြီး သွားလာလှုပ်ရှားနေကြတာကို တွေ့ရပါတယ်….
တချို့ လူတွေက ရေသန့်ဘူးကြီးတွေကို ဖြတ်ပြီး ခေါင်းမှာစွပ်ထားကြပါတယ်…တချို့ကတော့ ကြွပ်ကြွပ်အိတ်အကြီးကြီးတွေကို စွပ်ထားကြသလို တချို့ကတော့ ဆိုင်ကယ်ဦးထုပ်တွေ ဆောင်းထားကြပါတယ်… သူတို့ပုံစံကြည့်ရင် ရယ်ရမလိုထင်ရပေမယ့် တကယ်တမ်းမှာတော့ သူတို့တွေရဲ့ စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေကို အတိုင်းသားမြင်နိုင်ပါတယ်….
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်အတွက် ကုသဆေးကလည်း ရှာဖွေစမ်းသပ်နေတုန်းရှိပြီး အဆိုပါဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့် သေဆုံးသူတွေ ကူးစက်သူတွေ မြင့်တက်လာတာကြောင့် သူတို့ရဲ့ စိုးရိမ်ပူပန်စွာနဲ့ တတ်နိုင်သလောက် ကာကွယ်နေကြပုံလေးကို စာနာနားလည်နိုင်လို့ ဓာတ်ပုံလေးတွေ ပြန်လည်မျှဝေလိုက်ရပါတယ်နော်…
Writer – HW (Shwe Yaung Lan)
Source : Daily Mail (Via;shweyaunglan.com)
ပရိတ်သတ်တွေ မသိကြသေးတဲ့ အေးမြဖြူနဲ့ယွန်းယွန်း တို့ရဲ့ ငယ်စဉ်ကတည်းက ဆက်နွယ်မှုလေး တစ်ခု
သူမနဲ့ မိုးအောင်ရင်ကြားက အကြီးမားဆုံး လျှို့ဝှက်ချက်ကို ဖွင့်ဟလာတဲ့ ချစ်သူဟောင်း ခင်မြတ်နိုး